↟Indawo yokuhlala efihlakeleyo kwiiAlps zase-Italiya↟ - I-Airbnb
↟Indawo yokuhlala efihlakeleyo kwiiAlps zase-Italiya↟
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguRiccardo
SinguRiccardo, uCristina, uLorenzio noBianca, kwaye size kule ndawo ehlathini ukuze siqalise ubomi obulula kodwa obunomvuzo, sizama ukufunda kwindalo. Ikhaya lethu elikwihlathi elinzulu lentaba lihlala lodwa elizolileyo, ikhilomitha e-1 ukusuka kubemi abakufutshane. Sikunika indlu ekwiattic elungiswe ngesandla nguRiccardo. Le ndlu inebhedi enkulu kunye ne-sofa yokutsala (zombini zibekwe phantsi kwe-skylights), indawo yokuhlala, ikhitshi, igumbi lokuhlambela labucala kunye nembono yentlambo.
Kwiimbongi, izazi zendalo, iinkcuba-buchopho, ababhali, abakhenkethi kunye nabathandi boxolo: ikhusi emahlathini. 'Aran'. Ifumaneka kwithambeka lentaba ecaleni kwendlela eya kwiSanctuary yaseSanta Cristina, ikhaya lethu lijikelezwe zii-chestnuts, iibhirch, iihazels, amakhowa asendle, izityalo ezinevumba elimnandi kwaye zizibonakalisa njengomnyango weVal d'Ala.
Apha, uziva uyinxalenye yezinto. Siqwalasela amandla angathethiyo endalo, sisebenza nawo endaweni yokuwachasa. Kukho ubuhle basendle obungena kuyo yonke into esingqongileyo, ethi kwangaxeshanye ifune ukhathalelo lwethu kunye nengqalelo yethu, kwaye inika impiliso kunye nenkuthazo. Ngexesha lakho apha, uya kuba nethuba lokuphinda uhlangane nendalo ngale ndlela, ufumane indlela edibana ngayo nawe buqu.
Kule ndawo, sikwanazo nezilwanyana zasekhaya- iikati ezimbini, izinja ezimbini, kunye neenkukhu, zonke zizulazula ngokukhululekileyo. UDharma, inja yethu ezolileyo yomalusi, iya kukukhokela ekuhambeni kwakho ukuba uyathanda.
Sihlala apha unyaka wonke, kwaye sisebenza yonke imihla ukuphucula ipropati ukuze ekugqibeleni sikwazi ukuzimela. Asibambeki kuzo naziphi na iindwendwe ezikhetha ukuba namava azimeleyo, kodwa wonke umntu wamkelekile ukuba azibandakanye nathi xa sikhululekile.
Sihlala apha unyaka wonke, kwaye sisebenza yonke imihla ukuphucula ipropati ukuze ekugqibeleni sikwazi ukuzimela. Asibambeki kuzo naziphi na iindwendwe ezikhetha ukuba namava azime…